ညီအစ်ကိုလို ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ကျ ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ G Fatt….. – Cele Snap
ညီအစ်ကိုလို ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ကျ ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ G Fatt…..
March 28, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..အဆိုတော် G Fattဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားတွေမှာ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မမောနိုင် မပန်းနိုင်အောင် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရုံတင်မကဘဲ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း Defense Team မှ လူငယ်တွေနဲ့အတူ ရှေ့ဆုံးက နေထွက်ကာ ကာကွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း G Fatt ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်း တစ်ခုရေးသား ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒီကနေ့မှာဘဲ ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ကျ ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေပြီး သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သွားနှင့်​တော့ ညီ​လေး​ ဖီဖီ​ရေ . ၁၆ /၃ အတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်ညီ​လေး ။ အထက ၂ သပိတ်​ကြောင်းတူတူထွက်ဖူးတဲ့ညီ​လေး … မင်းအစ်ကို ခင်ရှင်းလေး​တော့ ​ပေါက်ကွဲ​နေ​ရော့မယ်ကွာ ..ခင်ရှင်းလေး​ရေ ကိုကြီးတို့ မင်းညီအတွက် အဆုံးထိတိုက်မှာပါကွာ မင်းဘယ်​လောက်နာကျင်​နေမလဲ ငါခံစားမိပါတယ် စ​တွေ့တည်းက တက်ကြွပြီး ရိုးသားတဲ့ညီငယ်​တွေနဲ့ အတူတူ ရုန်းခွင့်ရတာ ငါဂုဏ်ယူပါတယ် ဒီ​​နေ့​တော့ ငါ ငိုင်ကျသွား​တော့တာပါပဲကွာ .. ငါတို့မင်းအတွက် တာဝန်​ကျေ​စေရမယ်ညီ​လေး ..
ဒီအ​ရေး​​တော်ပုံမှာ မင်းရိုက်​ပေးတဲ့ဓါတ်ပုံ​တွေငါတင်ဖူး​ပေါ့ကွာ ..ထ၂ သပိတ်​​ကြောင်းမှာ မင်း​ရှေ့က ​ပြေးလိုက်ပုံရိုက်လိုက် ငါမျက်လုံးထဲကမထွက်ဖူးကွာ .. မင်းက ၁၆ရပ်ကွက်ရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ သူရဲ​ကောင်းပါညီ​လေး ငါဦးညွှတ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ညီ​တွေလဲ ​နောက်​နေ့​တွေဂရုစိုက်ပါကွာ ငါတို့ထပ်မ​ပေးပါ​ရ​စေနဲ့​တော့ ငါလည်း ဘာ​ပြောရမှန်းကိုမသိ​တော့ပါဘူးကွ ငါရပ်ကွက်ထဲအတူမရှိ​ပေးနိုင်ခဲ့တာ ​တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ။ ငါတတ်နိုင်တာ အကုန်ဝင်ကူပါ့မယ် ကွာ ။ #အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါ​စေ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
Photo Crd-G Fatt’s Facebook Account
ပရိတျသတျကွီးရေ…..အဆိုတျော G Fattဟာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခုလကျရှိမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားတှမှော ပွညျသူတဈဦးအနနေဲ့ တကျကွှစှာပူးပေါငျးပါဝငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျရကျဆကျ မမောနိုငျ မပနျးနိုငျအောငျ လမျးပျေါထှကျကာ ဆန်ဒထုတျဖျောနရေုံတငျမကဘဲ အရေးကွီးတဲ့ အခြိနျတှမှောလညျး Defense Team မှ လူငယျတှနေဲ့အတူ ရှဆေုံ့းက နထှေကျကာ ကာကှယျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ မိနဈပိုငျးလောကျကလညျး G Fatt ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ စိတျမကောငျးစရာသတငျး တဈခုရေးသား ဝမြှေပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ဒီကနမှေ့ာဘဲ ခဈြခငျရတဲ့ ညီလေးတဈယောကျကြ ဆုံးသှားခဲ့တဲ့အတှကျ စိတျထိခိုကျဝမျးနညျးနပွေီး သူနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” သှားနှငျ့​တော့ ညီ​လေး​ ဖီဖီ​ရေ . ၁၆ /၃ အတှကျငါဂုဏျယူတယျညီ​လေး ။ အထက ၂ သပိတျ​ကွောငျးတူတူထှကျဖူးတဲ့ညီ​လေး … မငျးအဈကို ခငျရှငျးလေး​တော့ ​ပေါကျကှဲ​နေ​ရော့မယျကှာ ..ခငျရှငျးလေး​ရေ ကိုကွီးတို့ မငျးညီအတှကျ အဆုံးထိတိုကျမှာပါကှာ မငျးဘယျ​လောကျနာကငျြ​နမေလဲ ငါခံစားမိပါတယျ စ​တှတေ့ညျးက တကျကွှပွီး ရိုးသားတဲ့ညီငယျ​တှနေဲ့ အတူတူ ရုနျးခှငျ့ရတာ ငါဂုဏျယူပါတယျ ဒီ​​နေ့​တော့ ငါ ငိုငျကသြှား​တော့တာပါပဲကှာ .. ငါတို့မငျးအတှကျ တာဝနျ​ကြေ​စရေမယျညီ​လေး ..
ဒီအ​ရေး​​တျောပုံမှာ မငျးရိုကျ​ပေးတဲ့ဓါတျပုံ​တှငေါတငျဖူး​ပေါ့ကှာ ..ထ၂ သပိတျ​​ကွောငျးမှာ မငျး​ရှကေ့ ​ပွေးလိုကျပုံရိုကျလိုကျ ငါမကျြလုံးထဲကမထှကျဖူးကှာ .. မငျးက ၁၆ရပျကှကျရဲ့ တဈနိုငျငံလုံးရဲ့ သူရဲ​ကောငျးပါညီ​လေး ငါဦးညှတျပါတယျ ။ ကနျြတဲ့ညီ​တှလေဲ ​နောကျ​နေ့​တှဂေရုစိုကျပါကှာ ငါတို့ထပျမ​ပေးပါ​ရ​စနေဲ့​တော့ ငါလညျး ဘာ​ပွောရမှနျးကိုမသိ​တော့ပါဘူးကှ ငါရပျကှကျထဲအတူမရှိ​ပေးနိုငျခဲ့တာ ​တောငျးပနျပါတယျကှာ ။ ငါတတျနိုငျတာ အကုနျဝငျကူပါ့မယျ ကှာ ။ #အာဏာရှငျစနဈကဆြုံးပါ​စေ ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေးကိုတဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းရဲ့ အစ်မ၊ အစ်ကိုနဲ့ညီ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရပြီး အစ်မဖြစ်သူ မဥမ္မာရှိန် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်း…..
သူမကိုယ်တိုင်က မိဘဖြစ်ခဲ့လို့ အခုလိုမိဘဆုံးရုံးသွားခဲ့တဲ့ကလေးတွေကို ကိုယ်ချင်းစာကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)…..